Ulefone Tiger, ama dị ịtụnanya maka ihe na-erughị 100 euro | Gam akporosis
Ulefone Tiger, ama dị ịtụnanya maka ihe na-erughị euro 100
José Alfocea | | Noticias, Ulefone
Ulefone nwere ike ọ gaghị abụrịrị ụdị ama ama maka gị. N'ezie, ọ dịghị mma dịka ndị dike ndị ọzọ na mpaghara gam akporo ama dị ka Huawei, HTC, Xiaomi ma ọ bụ Samsung n'onwe ya, agbanyeghị, onye nrụpụta China a jisiri ike wepụta ihe dị mkpa n'ahịa, na-egosi na teknụzụ dị elu. enweghi ihe kpatara onu ahia.
Ulefone Tiger bụ nzọ nzọ kachasị ọhụrụ gị. A smartphone nwere njirimara ndị na-agba ọsọ na plastik, ike, arụmọrụ dị elu yana nnukwu batrị na-enye ya ikike nke onye ọrụ ọ bụla chọrọ na ndụ ha kwa ụbọchị. Na ihe niile a na-erughị euro 90. I kweghi m? Ezi uche, ma gụọ ma chọpụta ihe niile Ulefone ọhụrụ ahụ nwere ike ịnye maka ọnụahịa ahụ na-enweghị atụ.
1 Ọfọn, dị mma ma na-adịgide adịgide, nke a bụ Ulefone Tiger
1.4 Onwe ya
1.5 Ulefone Tiger ọnụahịa na nnweta
Ọfọn, dị mma ma na-adịgide adịgide, nke a bụ Ulefone Tiger
Nke a bụ otú ụlọ ọrụ n'onwe ya si akọwa ihe ọhụrụ Ulefone Tiger, smartphone nke na-apụta maka arụmọrụ ya dị mma yana ọnụ ahịa ya nwere ezi uche, nke ahụ ga-abụkwa nke ihe karịrị otu onye ọrụ chọrọ. You ga-anọ ebe ịta nri ga-emegharị ekwentị gam akporo gị? Ọfọn, ị ga - ahụrịrị ihe “agụ” sitere na Ulefone nwere ike ịnye gị, akpa gị ga-enwe ekele maka ya.
Ọhụrụ Ulefone Tiger nwere nnukwu 5,5 anụ ọhịa ahụ y 1280 x 720 HD mkpebi con Gorilla Glass 3 ga-abata na Android 6.0 Marshmallow arụnyere dị ka ọkọlọtọ na asụsụ ala ya na nke ọzọ.
A ga-akpali usoro ihe niile a MediaTek 6737 1,3 GHz quad isi processor tinyere Nchekwa 2 GB Ram.
Banyere ikike nchekwa ya, ọ ga-abata 16 GB ọkọlọtọ (ebe a ụmụ okorobịa si Ulefone adaala ntakịrị) ma ọ bụ ezie na enwere ike ịgbasa ya site na kaadi microSD ruo 128 GB.
El Ulefone Tiger Ọ bụ ama nwere ọgbara ọhụrụ, mara mma ma na-akpachapụ anya. A na-eji ọla, ejiri akụkụ bezels belata na okwu pere mpe, akụkụ nke 155.8 x 77.8 x 9.35 millimeters na ibu naanị 155 gram. Yabụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị ọdụ kachasị njọ n'ahịa, ọ ga-adị mfe ma nwee ntụsara aka.
Na njikọ Njikọ, ndị Ulefone Tiger na-akwado netwọk GSM 850/900/1800/1900 (band5, band8, band3, band2), WCDMA 900/2100 network (band8, band1) na FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600 network (band20, band8, band3 , band1, band7), WiFi 2.4GHz 802.11b / g / n, yana Bluetooth 4.0 iji jikọọ ngwa ndị kachasị amasị gị dịka ekweisi, ọkà okwu, smartwatches ...
Otu n'ime ebe Ulefone smartphone ọhụụ pụtara bụ n'ihe gbasara foto na vidiyo. Na Ulefone Tiger O nwere ese foto abụọ. Ejiri igwefoto igwe azụ bụ Sony, ọ bụ 219 megapixel Sony IMX13, nwere ikike na vidiyo vidiyo nke 1080p na kamera ihu n'ihu dịtụ ntakịrị, dịka ọ bụ omenala na ama niile, ma na-enye 5 megapixels.
Ma nnukwu ebe na ihu ọma nke Ulefone Tiger ọ bụ nnukwu ụgbọ ala. Ọnụ ọnụ webatara a batrị lithium 4.200 mAh nke Sony mepụtara nke na-ekwe nkwa n'etiti oge 480 na 550 na ọnọdụ nkwụnye na nke ahụ, obi abụọ adịghị ya, ga-enye ndị ọrụ ohere ịtachi obi ụbọchị ahụ niile na enweghị nsogbu, ọbụnakwa na-ehi ụra "na oke ike", dịka onye nrụpụta n'onwe ya na-egosi na ọnụ ga-ejide ruo ụbọchị abụọ nke iji ya eme ihe.
Na mgbakwunye na ihe niile anyị kwurula, ndị Ulefone Tiger O nwekwara redio redio, onye na-agụ akara mkpịsị aka, GPS, accelerometer, ihe mmetụta ọkụ ọkụ, yana SIM abụọ, yabụ ị nwere ike iburu nọmba ekwentị abụọ na-enweghị ịgbanwe ọnụ.
Ahịa na idiadi nke Ulefone Tiger
El Ulefone Tiger Ọ bụ na pre-ire na-adọ na a price nke $ 99,99 ruo mgbe October 29. Mgbe ụbọchị ahụ gasịrị, ọnụahịa ya ga-abụ $ 119,99. A na-enye ya na njedebe atọ Sky Blac, Space Gray na Champagne Golden, ma ị nwere ike ịzụta ya, n'etiti ndị ọzọ, na Aliexpress, maka ihe karịrị euro 90.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ulefone Tiger, ama dị ịtụnanya maka ihe na-erughị euro 100
Ọ dị mma ma ọ masịrị m BLUBOO EDGE
Google Pixel pụtara dị ka ama kacha mma gam akporo nke oge a
Samsung Galaxy C9 nwere igwefoto 16MP na 6GB nke RAM ka ekwuputa na October 21